डिभी चिठ्ठाको रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक, यहा बाट हेर्नुहोस तपाईलाई डिभी पर्यो की ?
Homeसमाचारडिभी चिठ्ठाको रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक, यहा बाट हेर्नुहोस तपाईलाई डिभी पर्यो की ?
May 6, 2019 Spnews समाचार 3
इडिभी चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष (२०१९)मा भरेको इडिभीको नतिजा सोमबार राती १२ बजेदेखि हेर्न सकिने छ ।डिभी परे नपरेको हेर्न डिभी फारम भर्दाको कन्फर्मेसन पेजमा भएको नम्बर, आफ्नो थर र जन्म मिति आवश्यक पर्छ ।
नतिजा चेक गरेको पैसा लाग्दैन। डिभीको नतिजा कम्प्युटर प्रणालीबाट छानिने हुनाले यसमा अन्य कुनै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव रहँदैन।इडिभी परेको र नपरेको थाहा पाउनका लागि www.dvlottery.state.gov काे प्रयाेग गरेर हेर्न सकिन्छ ।
डिभी चिठ्ठाको रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक
यहा बाट हेर्नुहोस तपाईलाई डिभी पर्यो की ?
कोटेश्वर चोकमा शंकास्पद वस्तु फेला, सवारी आवागमन ठप्प
आमासँगै जेलमा रहेकी ४ वर्षीया बालिकाले ल्याइन नर्सरीमा ९६ प्रतिशत ! सम्मान सवरूप शेयर गरौ !
May 7, 2019 Spnews समाचार 2
अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) २०२० को नतिजा मंगलबार राति प्रकाशित हुने भएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासका अनुसार नेपाली समयअनुसार राति ९ः ४५ बजे नतिजा प्रकाशित हुनेछ । डीभी चिठ्ठा परे नपरेको यहाँ क्लिक गरिन हेर्न सकिनेछ […]
RUM BAHADUR GURUNG says:
Dhiraj kumar sah says:
http://www.sahd588@gmail.com another address
name is sarlahi(nepal)
sahd588@gmail.com sarlahi (nepal)